mutendid – Page 2 – Daniel Mutendi
Home > Articles Posted by mutendid
Maidei wakanga achengetera matama ake mumaoko zvino. Misodzi yakanga isina achapukuta. Zvimadzihwa ndizvo zvaaipota achikwevera mukati memhino apo neapo. Nhambo yakanga yafamba chose musi uyu asi iye akaramba akangogara akatarira rinda rababa vake. Mivhunzo yose yaakanga avhunza yakanga isina akanga akwanisa kuipindura. Guva harina kana nekuzununguka kose. Panguva idzi, kwakanga kwatodarika makore matatu ose kubva
Kubva mazuva angu ndichirikuchikoro, ndaigara ndichihwa vakuru vachiraira vanasikana kunyanya. Zvainzi ‘kana ukanyanya kufarira kutamba nevakoma, unoita pamuviri’ Izvi ndaizvihwa posepose, kungava kumba, kuSvondo kana pamaTV nemumaradio. Nanhasi ndinongohwa vakuru vachidzokorora mashoko iwawa. Vakomana vanoudziwavo asi zvishoma, kuti kana vakanyanya kufarira kutamba nevasikana, hazvishamisa kana vakaita vanababa vemba vasati vada. Mashoko awa akanaka chose uye
Mhoroi mosemose uko! Ndati ndimboshumavo nyaya yangu pano. E-ee, Pano paita zvedare kana kuti dandaro chairo. Ndavhuravo nzvimbo yekuti kunevaya vanoshuvira kuhwereketa kana kutaura nevamwe vanonakigwa nendimi dzeChiShona vapote vachivhakacha pano kana kutotumiravo fungwa dzavo dzavangada kuti vamwe vadzidzeye. Munoona, chimwe chezvinhu zvinoita kuti isu vanhu vazhinji vemuno muAfrica, kunyanya muno muZimbabwe tizvivenge pakusvika kurasha
Tags: Daniel Mutendi
Vabereki vangu vakatamburira kuti ndiinde kuchikoro Danga ren’ombe ndakapedza ndoga Vakasimira mamvemve kuti ndiwane dzidzo Naizvozvo ndakavapa gose rukudzo Vakandidzidzisa zvakawanda zvoupenyu Dzidziso yavo ndikaichengeta Ndakaichengetera mukati-kati memoyo wangu Ndakadzidza chikoro neshungu Mushoka musine chero shangu Ndaivanga zuva roga roga Kuti ramangwana rangu rijeke Vari kumhepo vakadavira nemufaro Ndikakunda pazvidzidzo zvangu Vabereki vakafara vakabike doro
Categories: Daniel Mutendi, Nhetembo, Pamusha
Mubwiro Havapindi Nazvo
Tsunga mhuri yanguwe-e Nhambo ino usiku asi mangwana zuva rinobuda Ndinozviziva munavo vana mukumbazvose Vane moyo mikukutu chose Mukavati nokorai ivo vanotomurudza chaenga chose Kuvati vhurai zhira yekwambuya Muguri wose unobandiwa Chiororo chiripo zvacho Mubwiro havapindi nazvo Vari pamakwikwi kukambura zvidhlo zvavana Hona voita zvokukomberana Kwai vakuru vakareve nhema Pavakati hushe madzoro Hino kwavari huchava
Nhasi mangwanani ndapinda muneimwe supermarket ndinechichemo changu ndikabatwa zvandikathlamadza chose. Ndatumigwa kune mumwe mudzimai anechinzvimbo chezvimwe zviripamusoro imomo kuti andibetsere. Mudzimai uyu wandimhorosa nechirungu ini ndikadavira hangu neChiKaranga. Tamboenda mberi tichitaura saizvozvo kusvika ati haatendegwi kutaura neni nechiShona. Ndakathlamara chose nazvo ndikamukumbira kuti andidanire munhu unogona kuhwanana neni pamutauro wangu. Waratidza kushipikana chose kusvika angozoti